[တရားဝင်] dr.fone - iOS ကိုအပြည့်အဝဒေတာများနေတဲ့ Eraser: iPhone ကို Wipe လုံးဝ & အပြီးတိုင်
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကိုအပြည့်အဝဒေတာများနေတဲ့ Eraser
အလွယ်တကူသင့် Device ကိုကနေအားလုံးဒေတာများကိုဖျက်ပစ်ပါ
သင့်ရဲ့ Device ကိုရောင်းချသို့မဟုတ်လှူဒါန်းခဲ့?
ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာထုတ်ရှင်းလင်းဖို့ဒီ iOS ကအပြည့်အဝဒေတာများကို Eraser ကိုအသုံးပြုပါ။
iPhone ကို Wipe: identity theft ကနေသင့်ရဲ့ privacy ကာကွယ်ပါ
အဲဒီမှာသုံး iPhone / iPad ကနေအချက်အလက်ဟောင်းများကိုခြေရာကောက်ရန်နည်းလမ်းများအများကြီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, 10 ထဲက 1 ကမ္ဘာပေါ်မှာသူခိုးတွေတစ်သားကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဟောင်းက iPhone / iPad ကိုရှင်းလင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
iPhone ကို Wipe: တစ်နည်းမှန်လမ်းမှန်၌သင်တို့၏ iPhone ကို Wipe
အထွေထွေက iPhone / iPad ကိုပြန်စခြင်းသည်မလုံလောကျပါပဲ။ လုံးဝနှင့်အမြဲတမ်းအတွက်တစ်ဦးသည် iPhone ကိုရှင်းလင်းဖို့, သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ် Third-party tool ကို reply ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
iPhone ကို Wipe: အဟောင်းက iPhone / iPad ကိုသုတ်ဖို့လိုအပ်ဘယ်သူနည်း
သငျသညျအစဉျအမွဲသင်၏ဘဏ်သတင်းအချက်အလက်, ID ကိုနံပါတ်များ, အထိခိုက်မခံပြောဆိုမှုများ, ဤကဲ့သို့သောအခြားပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များထဲသို့ဝင်ပြီးပြီဆိုပါက, သင်ရောင်းရှေ့၌သင်တို့ဟောင်းကို iPhone / iPad ကိုသုတ်သို့မဟုတ်ပါကဝေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
iPhone ကို Wipe: အားလုံး iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့ Wipe
သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် iPhone မှာ 7, အိုင်ပက် Pro ကို, ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းက iPhone 4, iPad နဲ့ 1 ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်နေပါစေ, ဒီ iPhone ကိုဒေတာ Wiper iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့မော်ဒယ်များအားလုံးနှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ် ..
ဤသည် iPhone ကိုဒေတာ Wiper လုံးဝကိုဖတ်ရှုသာဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်မဆိုဒေတာ, စောင့်ရှောက်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို ယူ. အလေးအနက်ထားအကောင့်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲပြုလုပ်ရယူနိုင်သူကိုသာလူတစ်ဦးပါပဲ။
အမြဲတမ်းသင့် iPhone, iPad ကနေအားလုံးဒေတာများကို Wipe
သငျသညျကိုဖျက်အဆိုပါဒေတာများကိုအစဉ်အမြဲသွားပြီလိမ့်မည်။ ဘယ်သူမှမဟုတျဘဲပင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝိသေသလက္ခဏာသူခိုး, အစဉ်အဆက်က recover နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Windows ကို 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP ကို; Mac OS X မှာ 10.11 (အယ်လ် Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, ဒါမှမဟုတ် 10.6
စသည်တို့ကိုအဆုံးမဲ့ recovery mode ကိုအနက်ရောင် Screen, ထပ်ခါတလဲလဲကဲ့သို့ iOS ကိုစနစ်ကပြဿနာများကိုဖြေရှင်း